Nke a bụ oge ezumike mmiri? | Martech Zone
Nke a bụ oge ezumike mmiri?
N’izu a ka m nọ ezumike. Ọ fọrọ nke nta ka m chuckle na-ekwu na n'olu dara ụda. Nke a bụ otu ezumike m si aga ugbu a:
Ihe dị ka iri na abụọ nke saịtị m (ma ọ bụ saịtị ndị ahịa m) na-akwalite ugbu a. A na-akwaga saịtị ndị ahụ na sava ọhụrụ, ngwa ngwa na nsụgharị niile nke ngwanrọ niile. Nke ahụ, n'ezie, na-eduga na DNS mbipụta (ezigbo enyi m na ndị ahịa na saịtị ibugharị ka a spammer peeji niile abalị… ugh!), Njikọ njikọ data, mbipute mbipụta, isiokwu nsogbu, ngwa mgbakwunye… ị kpọrọ ya. Anọ m na-esote elekere isii nke ụtụtụ nke ụtụtụ na-edozi nsogbu. Enwere m otu saịtị (ee, otu ahụ!).
Enwere m webusaiti m na-ewepụta n’izu a (ebe ọ bụ na enweghị m oge ọzọ) nke ahụ nọ na mmepe ugbu a. Agbanyeghị, rue ugbu a, ọ gafeela nke ọma. Ebugala m data nchekwa data Geographic nke Adreesị IP site na Maxmind na koodu edere edere ga-echekwa map ndị ọzọ na-adabere na onye ọrụ na-eleta ya. The free mbipute nke API ezughi oke ma ọ dịkarịa ala na-eduzi onye ahụ gaa mpaghara kwesịrị ekwesị.
Arụ ọrụ amalitela n’iwu ngwa mgbakwunye maka WordPress iji mee ka Ntuziaka Onye Ọrụ dị ọcha karịa. Arụ ọrụ adịghị agbanwe agbanwe, mana ọdịdị na mmetụta a ka mma (lee anya n’okpuru). Ajuala m Sean Geek na laptọọpụ iji nyere m aka pụta. Adị m mma na atụmatụ WP na nsogbu nchọgharị, mana ejiri m n'aka na Sean nwere ike iweta ụlọ a.
Ma n'ezie, ụmụ m nọ n'ụlọ. Nwa m na akwado maka Prom ma na aga Mahadum Indiana. Nwa m nwanyị nọ na "ọnọdụ enyi nwanyị" zuru oke ka ekwentị na-akụ na-enweghị nkwụsị na ndị nọ n'afọ iri na ụma na-abanye ma na-apụ dị ka ọ bụ Grand Central Station. Achọrọ m isi na windo wụpụ! Luckily, Anọ m na ụlọ nke abụọ.
Tụkwasị na nke a na m chọrọ ịkwado ndụmọdụ m (ana m ewere ego kwa afọ na-enweta ego n'afọ gara aga na-enweghị ya) yabụ izu m jupụtara na oku na nri ehihie.
Kedu ka nke ahụ si bụrụ ezumike? Enweghị m ike ịlaghachi azụ ịrụ ọrụ iji nweta ezumike! (Ọ bụghị!)
Na-ada ka ezumike m.
Kidsmụ m nọ n'ụlọ n'izu a, kwa. Nke ahụ bụ ezumike maka * ha * ọ bụghị mụ na nwunye m 🙂
Hey Doug, na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ na mgbakwunye mgbakwunye ha.
Emeela m ọtụtụ plugins WP omenala maka ndị mmadụ mana ahapụghị m ọha na eze mana nke ahụ ga-agbanwe na ụbọchị ndị na-abịanụ n'oge na-adịghị anya ka m gafere ya site na nyocha ole na ole.
Ọ bụrụ na oge gị …h, oge ezumike kwere mits Ọ ga-amasị m ka ị gbanye taya na ya.
Making na-eme m ihe ma ọ bụrụ na m ga-echegharị ezumike m! Willmụaka ga-akwọ gị akụ!
Enwere m ezigbo mmasị na ngwa mgbakwunye WordPress ahụ ị kwuru. Ọ ga-abụrịrị iberibe na ihe niile gbasara WP ma e wezụga na ọ bụ ikenye interface! Nsogbu m nwere na ya bụ na ọ ghago aghara, ị nweghị ike iwepu mkpọtụ ahụ wee lekwasị anya na edemede gị.